Inona avy ireo fomba fampihenana ny tany? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona avy ireo fomba fampihenana ny tany?
Ahitsio: Denny　2019-12-08　Mobile
Ny fomba fananganana gorodona dia sarotra sy lafo kokoa noho ny fampiharana tile. Ny fomba fanao mahazatra indrindra dia: ny fomba fametrahana adhesive mivantana, fomba fametahana ny takelaka, fomba fametrahana fampiatoana sy fomba fametrahana ny takela volon'ondry. Ny fomba fanoratana mivantana dia ny tsotra indrindra ary tsy misy votoaty teknika. Izy io no tena fahita indrindra, ary ny fomba fanaovan-jaza fampiatoana ny teknika dia matetika ara-teknika ary ampiasaina amin'ny hazo laminate sy gorodona fahamasinana.
Ny tena mampiavaka ny fomba fisotroan-dronono dia fomba tsotra vita amin'ny gorodona izay ametrahana mivantana ny gorodona amina boaty foitra na rakitra fandriana natokana ho an'ny fametrahana ny gorodona hazo fa tsy hikapoka ny kitroka hazo. Izy io dia mety indrindra amin'ny alàlan'ny fivarotana rihana maitso sy ny gorodona parla.Ny taona vitsy lasa izay, ny fampiharana ny gorodona haingam-pandeha mafanafana (geothermic) dia nampiharina ihany koa ny fomba fampiatoana. Ny trangam-pananana naato dia mizara ho tsentsina amin'ny lavarangana fampiatoana sy tsy mijanona mihantona. Ny mahasamihafa azy ireo dia ankoatry ny akora voajanahary eo anelanelan'ny tenona sy ny aloka, ny fomba fanaovana ny fampiatoana ny vazaha dia tsy maintsy mamatotra miaraka amina adhesive mba ahafahana mivaingana kokoa; ny fomba fampiatoana tsy mitanila dia miankina amin'ny tenona sy ny tenona. Ny fampifangaroana ny aloka dia ahafahana mivezivezy sy mihangona sy ny fanitsiana ny hantsana.
Amin'izao fotoana izao dia misy haingo ny gorodona manakarena ny fomba fampiatoana ny fampiatoana, izany hoe rehefa mandoka gorodona vita amin'ny hazo matevina dia ampiasaina ny fomba fampiatoana tsy vita amin'ny herintaona. Rehefa vita ny fanamafisana ny kitay hazo sy ny fanakorontanana dia ampiasaina ny fomba fananganana ny fampiatoana ny vava amin'ny fomba faharoa amin'ny taona faharoa, mba hahafahan'izy ireo maharitra mandritra ny fotoana maharitra.
Inona avy ireo fomba fampihenana ny tany? Ny atiny mifandraika